अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चलाए वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने ! – Nepal Online Khabar
अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चलाए वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने !
August 24, 2020 15
काठमाडौं : अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्नेले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक सवारीको मात्र निश्चित आयु तोकेको सरकारले पुराना सवारीबाट हुने वायु प्रदूष’ण न्यूनीक’रण गर्न निजीलाई पनि अति’रिक्त कर तिर्न बाध्य बनाएको हो ।
सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि लागु भएको नियमअनुसार उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन । त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्रा’प) गर्नुपर्ने हुन्छ । त
र, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा भने आयु तोकिएको छैन त्यसैले निजी सवारी द’र्ता भएको १४ वर्ष कटेपछि सरकारले वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अ’तिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको छ ।
कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा पनि १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अ’तिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था छ ।
अहिले सरकारले यस्तो नियमलाई पू’र्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अब सडकमा गुडिरहेको जुनसुकै बेला ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक चेक गर्ने क्रममा पनि १४ वर्षभन्दा पुरानो निजी सावारी साधन चलाउने सवारी धनीहरूलाई यस्तो अतिरिक्त कर लाग्ने बारेमा जा’नकारी दिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
Prevप्रजिअ ज्यु जनताले मास्क नलगाउदा जरिवाना तिर्नुपर्ने, तपाईंले नि ? पूरा पढ्नुहोस् ।
Nextप्रधानमन्त्री ओलिको यस्तो छ तयारी ,नेताहरुको ब्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरु टु क्राउने योजना …हेर्नुहोस।
नेपाली छोरा सन्दीप गुरुङ विश्वकै इञ्जि’नियरमा प्रथम, उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना ।
खुशीको खबर: सामान्य लेखपढ भएकोलाई अमेरिकामा काम गर्ने सुनौलो सुवर्ण अवसर, यसरी भर्नुहोस् भिसाको लागि आवेदन !!
प्रचण्ड बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाए ओलीले रा जिनामा दिने के यो गर्नु ठिक हो त ?
दिपाश्री निरौलाले मुन्द्रेको कमेडी क्ल्बबाट हटाइए लगत्तै यस्तो प्रतिक्रिया दिइन्…हेर्नुहोस् ।
न्युरोडमा खुकुरी देखाएर आईएमई लुटपाट (2747)
अर्काको घरभित्र मध्यरात पसेको चोर बिहानसम्म पनि यस कारण भागेन (1967)
विद्यालय, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गरिने ! (1554)
गर्मी मौसममा चुकन्दरका ८ फाइदा (1273)
पत्थरीको लागी घरायसी औषधी आफ्नै घर मा यस्तो छ, प्रयोग गर्ने तरिका सहित । (1235)
पेरिसडाँडाको बैठक सम्पन्न : एमाले र माओवादी अलग-अलग भएर जाने निर्णय (864)
दुबईमा नग्न फोटोसुट, ११ महिला प’क्राउ (861)
वायु प्रदूषणले आँखाको ज्योतिसम्म गुम्ने खतरा (835)
मुला खाएपछि भुलेर पनि यी चीज नखानुहाेस् । पछुताउनु पर्ला ! (796)
बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण (729)
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्नुहुन्छ : मलाई सुनको लंका होइन मेरो आफ्नै जन्मभूमी प्यारो लाग्छ ।
भारतले दियो ज्ञानेन्द्रलाई राजा को सम्मान रथ मा घुमायर गरे स्वागत !
राजा महेन्द्रले ०१३ सालमा शिला’न्यास गरेको कान्ति लोकपथ अझै अधुरो, ६४ वर्षमा पनि बनेन ९० किलोमिटर सडक !
मनिषा कोइराला भन्नुहुन्छ : राजालाई जति देशको माया नेतालाई हुदैन, राज’तन्त्र नै अन्तिम विकल्प हो ।
स्वामी कैलशानन्द भन्नुहुन्छ : छिट्टै राजा ज्ञानेन्द्र पुन: स्थापित भएर नेपालीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।